सर्लाहीमा ३० वर्षीय युवकको हत्या- मधेस - कान्तिपुर समाचार
सर्लाहीमा ३० वर्षीय युवकको हत्या
सर्लाही — सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा–१० का नागेन्द्रराय यादवका ३० वर्षीय छोरा सुशीलको बिहीबार बिहान टाउको छिनालिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ ।
प्रहरीका अनुसार मलंगवा नगरपालिका–९ स्थित पचगछिया चौरीको खेतमा रायको शरीर र टाउको ६१ मिटर वरपर फेला परेको थियो । घटनास्थलबाट तीन किलोमिटर आसपास बस्ती छैन ।
स्थानीयले बिहीबार बिहान पचगछिया चौरीको खेतमा टाउकोबिनाको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घटनास्थल चौरी भएको र आलीमा अरहरले छेकिएको हुनाले बेलैमा कसैले भेउ पाउन सकेन । सूचना पाएलगत्तै प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौर आफैं घटनास्थल पुगेका थिए । बुधबार साँझ एकैछिनमा आउँछु भनेर घरबाट निस्केका सुशील अबेर रातिसम्म घर नआएको परिवारजनले जनाएका छन् ।
कसैले योजना बनाएरै हत्या गरेको दाबी मृतकका आफन्तले गरिरहेका छन् । विभिन्न कोणबाट हत्याको अनुसन्धान भइरहेको र संलग्नको नजिक पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । श्रीमतीले छाडेपछि सुशील केही वर्षयता घरमै बसिरहेका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०९:००
थ्री नेसन्स कप : गोल गर्न चुकेको ‘बेस्ट टिम’
मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले थ्री नेसन्स कपमा ‘नेपालकै सर्वोत्कृष्ट टिम’ छनोट गरेको दाबी गरेका थिए । तर, नेपाल १० खेलाडीमा समेटिएको किर्गिस्तानी टिम (यू–२३) सँग गोलरहित रोकियो । तैपनि प्रशिक्षकले सन्तुष्टि जनाए ।
चैत्र १३, २०७७ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — आर्मीका फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ ६ वर्षपछि राष्ट्रिय टिमबाट फालिए । पछिल्लो ‘ए’ डिभिजन लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता (एपीएफका आशिष लामा टिममा अटाएनन् । तीन वर्षयता उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका आर्मीकै डिफेन्डर विकास खवास छनोटमा परेनन् । थ्री नेसन्स कपमा मैदानमा ओर्लनुभन्दा एक दिनअघि २३ सदस्यीय टिम घोषणापछि नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले भनेका थिए, ‘सबैभन्दा उत्कृष्ट टिम ।’
दशरथ रंगशालामा बिहीबार र्किगिस्तान यू–२३ विरुद्ध गोलका लागि प्रयास गर्दै नेपालका अनन्त तामाङ र अभिषेक रिजाल (रातो) । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
त्यो उनको दाबी हो/थियो, जुन किर्गिस्तानको २३ वर्षमुनिको टिमविरुद्ध बिहीबार असफल भयो । कप्तान कोमोलिदिन तासिएभले दोस्रो पहेँलो कार्ड बेहोर्दै मैदान छाडेपछि पाहुना टिम अन्तिम २९ मिनेट दस खेलाडीमा समेटियो । नेपालको सिनियर टिमले ६ वर्षपछि पहिलोपल्ट दशरथ रंगशालामा फर्किंदा पनि त्यसको फाइदा लिन सकेन ।
मध्यएसियाबाट आएको ‘राष्ट्रिय टिम’ पनि होइन । बल अधिकांश समय घरेलु टिमकै नियन्त्रणमा रह्यो । तर, पोस्टमा एकपल्ट पनि गतिलो प्रहार हुन सकेन । त्यसैले २३ वर्षमुनिको किर्गिज टिमविरुद्ध पनि नेपाल गोलरहित रोकियो । बंगलादेशले १–० ले हराएको टिमविरुद्ध तीन अंक जोड्न असफल भए पनि प्रशिक्षक महर्जनले फेरि दाबी गरे, ‘टिमको प्रदर्शनप्रति सन्तुष्ट छु । जुन निर्देशन दिएको थिएँ, त्यो पालना गरेको अवस्था छ ।’ स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिनले कोभिड–१९ को कारण उतै रहेपछि गत भदौमा राजीनामा दिएका थिए र त्यसयता कार्यवाहकको रूपमा महर्जनले राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने मौका पाएका हुन् । उनले कात्तिक २८ र मंसिर २ मा बंगलादेशविरुद्ध ढाकामा भएका दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टिम हेरेका थिए, जहाँ नेपालले एक बराबरी र एक हार खेलेको थियो । त्यसैले हुनसक्छ, तीन महिनाको विशेष तयारीमा मैत्रीपूर्ण खेल नपाउँदा यही थ्री नेसन्स कपमा आएर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको महर्जनले बताए ।
उनले किर्गिज युवा टिमबारे अघिल्लो दिन भनेका थिए, ‘जुन हामीले सोचेका थियौं, त्यस्तो राम्रो पाएनौं । ट्रेनिङमा खेले जतिमात्रै खेल्यो भने पनि हामी जित्छौं ।’ यसबारे खेलपछि पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा महर्जनले भने, ‘त्योभन्दा बढी खेल्यौं ।’ उनको भनेजस्तो बढी के मान्ने ? किनभने उनको दाबी जसरी ट्रेनिङमा जस्तै खेलेको भए नेपालले जित हात पार्ने थियो तर, ३,४८० दर्शकसामु नेपालले न खेल जित्यो न त पोस्टमा गतिलो प्रहार नै गर्न सक्यो ।
उनले अञ्जन विष्ट र अभिषेक रिजाललाई अग्रपंक्तिमा उतारेका थिए । पहिलो हाफमा राम्रै देखिएका अञ्जनले पटकपटक पाएका अवसरमा प्रहार गरेको बल पोस्टबाहिरै गयो । उनले १४ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बल तासिएभमा डिफ्लेक्ट हुँदै पोलमा लागेर फर्किएको थियो । कर्नरमा पाएको अवसरमा दिनेश राजवंशी र अनन्त तामाङ चुके । दोस्रो हाफमा सब्स्टिच्युटका रूपमा मैदानमा छिरेका सुजल श्रेष्ठ र रविशंकर पासवानले पोस्टनजिक पाएका सहज अवसरमा गोल गर्न सकेनन् । अभिषेकले केही अवसर उपयोग गर्न सकेनन् । ७३ औं मिनेटमा अञ्जन र अभिषेकको स्थान लिएका फरवार्ड भरत खवास र दर्शन गुरुङले पनि केही गर्न सकेनन् ।
वास्तवमा यो खेलमा दुवै टिमका गोलकिपरको परीक्षण भएन । नेपालका कप्तान किरण चेम्जोङले दोस्रो हाफमा फ्रि–किकमा एकपल्ट बल समाते । त्यसबाहेक किर्गिज टिमले किरणलाई चुनौती दिन सकेन । पाहुना किपर अर्तेम प्रिएदकिनलाई पनि गाह्रो भएन । घरेलु टिमका सेन्टर डिफेन्स सम्हालेका अनन्त तामाङको दुई प्रहार र रोहित चन्दको हेडर सिधै अर्तेमको हातमा परेको थियो । बाँकी समय बलमाथि नियन्त्रण कायम राखे पनि नेपालले पोस्टमा धावा बोल्न सकेन, बल पोस्ट बाहिरै हानिरह्यो ।
पहिलो रोजाइमा खेलेका मिडफिल्डरद्वय सन्जोग राई र त्रिदेव गुरुङले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाउने मौका पाए भने अन्त्यतिर मैदानमा छिरेका डिफेन्डर निशान खड्काले पनि पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टिमबाट खेले । तर, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय टिम नभएकाले उनीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय खेल’ मा डेब्यु गर्न भने अर्को खेल कुर्नुपर्नेछ, जुन मौका बंगलादेशविरुद्ध शनिबार मिल्न सक्छ ।
तीन टिमको प्रतियोगिताको दोस्रो खेल बराबरीमा टुंगिएसँगै बंगलादेश फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो खेलमा किर्गिज टिमविरुद्ध १–० को जित पाएकाले बंगलादेशले एक खेल बाँकी छँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल र बंगलादेश शनिबार भिड्दैछन्, जसले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण’ खेलको मान्यता पनि पाउनेछ । त्यही खेलले फाइनलमा बंगलादेशको प्रतिस्पर्धीको छिनोफानो गर्नेछ । त्यसमा जित वा बराबरीले नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ । एक गोल अन्तरले हारेको अवस्थामा पनि कार्डको संख्या थोरै भएमा नेपाल फाइनल पुग्न सक्छ ।
‘नेपाल र बंगलादेश १९–२० को टिम हो । कहिले जित हुन्छ, कहिले हार । हामी अंक नगुमाउने गरी राम्रो खेल्नेछौं,’ प्रशिक्षक महर्जनले भने, ‘हामीले अंक गुमाउनु हुँदैन । चाहे ३ होस्, चाहे १ अंक लिएर हामी फाइनल तयारी गर्छौं । आजको खेलले मलगायत मेरो टिम र खेलाडीमा प्रदर्शनको स्तर राम्रो भएको छ, कन्फिडेन्स बढेको छ । राम्रो रिजल्टको आशा गर्छौं ।’
बंगलादेशविरुद्ध किर्गिज टिमको मंगलबारको खेलसँगै प्रतियोगिता सुरु भएको थियो । त्यसको एक दिनपछि मात्रै नेपाली टिम घोषणा गरिएको थियो । यस्तो छुट अरूलाई थिएन । टिमको फरवार्डमा नयाँ खेलाडी ल्याइएको सम्बन्धमा पत्रकारको प्रश्न नसकिँदै प्रशिक्षक महर्जनले झोंक्किए, ‘के लाग्छ तपाईंलाई ? मैले नयाँ ल्याएकामा के लाग्छ ? अरू ल्याउनुपर्ने थियो ? तपाईंले भन्नुभएको मतलब ? मैले जुन ल्याउनुपर्ने थियो, ल्याएको थिएँ, मैले जुन सोचेको पनि थिएँ । म सन्तुष्ट छु ।’
‘जसलाई विश्वास गरेर सुरुमा खेलाएँ, त्यसमा गरेको प्रदर्शनमा सन्तुष्ट छु,’ प्रशिक्षक महर्जन आक्रोशित देखिए, ‘मैले टिम छानेको सबैभन्दा बेस्ट हो अहिलेको नेपालको । म सन्तुष्ट छु । तपाईंहरू सन्तुष्ट होला, नहोला ∕ रिजल्टमा पनि प्रयासरत छु, पहिलो खेल हो यो । स्कोरमात्रै ननिस्केको हो । हामीले ५–६ गोलले अग्रता लिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो ठाउँमा चुकेको चाहिँ अवश्य हो । विगत तीन महिनामा कुनै पनि यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेको थिएन । पहिलो खेल भएकाले कताकता कमी कमजोरी देखिएको छ, त्यसलाई सुधार्दै लाने हो ।’
बंगलादेशले किर्गिस्तानविरुद्ध जित पाएको थियो हामीले सकेनौं भन्नेबित्तिकै उनले पत्रकारसँग प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंले खेल पनि हेर्नुहुन्छ कि नतिजामात्रै हेर्नुहुन्छ ?’ र, बोले, ‘बंगलादेशले हामीले जस्तै ७०–३० बल पोजेसन राखेर खेलेको छैन, आत्मघाती गोल भएको हो । गोल, रिजल्ट आफ्नो ठाउँमा छ । तर, जति बल पोजेसन राखेर हामीले दबाब दिएका थियौं, त्यो बंगलादेशले गरेको थिएन ।’ आफ्नो क्षेत्रमा बढी बल खेलेर बल पोजेसन राख्ने तर अट्याकिङ थर्डमा खेल्न नसक्ने नेपाली टिमको परम्परागत कमजोरी हो र यसबाट महर्जनको टिम पनि माथि उठ्न सकेन ।
गोल गर्न नसकेकोबारे उनले भने, ‘अट्याकिङ थर्ड (विपक्षीको पेनाल्टी क्षेत्रवरिपरि) मा केही हदसम्म बल नपाएको पनि होइन । वितरण भएको छ, पास दिएको छ, क्रस भएको छ । तर, त्यो ठाउँमा सम्भावित फरवार्डले अलिकति धैर्यता अपनाउनुपर्ने थियो, आक्रामक बढी देखियो । यसलाई पर्सिको खेलमा सल्लाह दिनेछु, ट्रेनिङमा सुधार्ने प्रयास गर्छु । अर्को खेलमा सुधारेर नतिजा ल्याउने छौं ।’ चारै फरवार्डले गोल गर्ने मौका सिर्जना गर्नुपर्नेमा सिधै प्रयास (बल प्रहार) गरेको र त्यसले व्यावसायिक फरवार्डमा हुनुपर्ने गुणमा कमी महसुस गराएको पनि उनले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०८:५१